Manondro an'i Scott Mawhinney ho mpitantana ny Cluster i Absheron Hotel Group
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Manondro an'i Scott Mawhinney ho mpitantana ny Cluster i Absheron Hotel Group
Jona 22, 2017
Ny Absheron Hotel Group dia nanendry an'i Scott Mawhinney ho toy ny Cluster General Manager vaovao. Miorina ao Baku, Azerbaijan, i Mawhinney dia hanara-maso ny hetsika ao amin'ny trano fandraisam-bahiny vaovao sy manokana; ny Bilgah Beach Hotel, sy ny Pik Palace ary ny hotely Park Chalet, izay samy hita ao amin'ny tanàna fialantsasatra ao Shahdag, 200 kilometatra avaratry Baku. Na ny trano fandraisam-bahiny Pik na ny hotely Park Chalet dia ao anatin'ny Collection Autographeo an'ny Marriott, natokana ho an'ny traikefa hotely voalamina tsara tarehy eran'izao tontolo izao.
Scott Mawhinney, teraka any Kanada, dia mitondra fahaizana manankarena amina kilasy manerantany manana ny traikefa nananany nandritra ny 25 taona, izay niasa nanerana an'i Azia, Eropa, Amerika Avaratra, Pasifika atsimo ary Moyen Orient. Vao tsy ela akory izay dia izy no Tale Jeneralin'ny Hotel Kingsbury izay nahazo loka marobe, tao Colombo, Sri Lanka. Talohan'izay dia nitana andraikitra ambony momba ny fanokafana zokiolona maromaro izy, anisan'izany ny hotely Burj Al Arab misy kintana 7 any Dubai, ary Hotely misy kintana Pangu 7 any Beijing. Izy koa dia nandany valo taona tamin'ny toerana ambony mpanatanteraky ny Shangri-La Hotel & Resorts. Tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana isan'andro, ny fahombiazana ara-bola ary ny varotra ary ny marketing ireo fananana telo ireo, i Mawhinney dia hitantana mpiasa 600 mba hahazoana antoka fa tratra ny fenitra iainan'ireo vahiny ambony kalitao.
Jiri Kobos, Tale mpitantana ao amin'ny Absheron Hotel Group dia nilaza fa: "Faly izahay mandray ireo olona manana firaketana an-tsehatra mahatalanjona nataon'i Scott amin'ny orinasanay. Matoky izahay fa izy dia ho mpitarika tsara sy aingam-panahy ho an'ny hafa amin'ny fitantanana sy fampiroboroboana ireo fananana telo miavaka ireo. ”
"Ny fanaraha-maso ny hotely telo malaza any Azerbaijan dia voninahitra lehibe ho ahy ary manantena ny hitondra ny fitomboana sy ny fampandrosoana ireo fananana tokana ireo aho," hoy i Mawhinney. “Ny fahitako azy dia ny manohy mametraka ireo hotely ireo ho isan'ireo toerana faratampony amin'ny fizahan-tany azerbaijan, raha jerena ny toerana mahaliana sy ny toerana akaiky an'ireo firenena manintona indrindra mandritra ny taona.”
Mawhinney dia manana MBA mpanatanteraka avy amin'ny University of Ottawa ary nahazo diplaoma tamin'ny Hotel Management and Administration avy amin'ny The Lausanne Hotel School. Izy koa dia manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny politika avy amin'ny University of Western Ontario, ary ny mari-pahaizana Cornell Hotel School momba ny fitantanana ara-bola sy ny fitantanana ny vokatra. Mahay miteny anglisy, frantsay ary espaniola izy.
Fikambanan'ny hotely any Sri Lanka: ekena ireo toetra tsara indrindra
Fitsangatsanganana, fialantsasatra ary ny Nizeriana